Buka imibukiso yangempela futhi udale amaphrojekthi akho ku-Vreale.tv
Kwenziwe ngothando lweqiniso imibukiso
Buka imibukiso engokoqobo edumile noma dala iphrojekthi yakho
Uma uthanda imibukiso engokoqobo
Iziqephu ezintsha, ukusakazwa bukhoma, izindaba nezinkundla mayelana nemibukiso yangempela: IBachelor, Survivor, iDrag Race Race kaRuPaul, iGreat Britain Bake nabanye abaningi.
Ukusakaza bukhoma nezingxoxo nabadlali
Ungalindi isiqephu esivele sihleliwe esinezigcawu ezisusiwe. Yiba yingxenye yesikhashana! Landela okwenzekayo njengamanje, nikeza amacebo futhi usekele abangenele.
Iziqephu ezintsha, izindaba nokuphakathi ngaphakathi
Bhalisela uhlelo oluthandayo, thola izaziso ngemicimbi emisha, iziqephu nezindaba. Kufaka imithombo engekho emthethweni noma evaliwe.
Thumela eyakho imibono, uvotele abangenele iqhaza noma umane uxoxe ngemicimbi nabanye abasebenzisi.
Uma ufuna ukudala umbukiso wakho wangempela
Bhala izindatshana ezibandakanyayo noma wenze amavidiyo mayelana nemibukiso engokoqobo edumile bese wenza imali. Okuqukethwe kwakho kuthakazelisa ngokwengeziwe, umholo wakho mkhulu. Akusekho amaklayenti akhethiwe kanye nokuhwebelana.
Qalisa ukusakaza bukhoma
I-smartphone noma ikhamera elula yewebhu yanele ekusakazeni okuhle. Ama-streamers anolwazi angasebenzisa i-OBS, StreamLabs nezinye izinhlelo zokusebenza zokusakaza.
Sebenzisa ithuba lokushicilela amavidiyo noma ubhale okuthunyelwe kusihleli esikahle. Ungashumeka futhi okuqukethwe okuvela ku-Youtube noma kwamanye amasevisi.
Abasebenzisi bangathumela izipho kumncintiswano wombukiso wangempela noma bacele ukuthi benze imisebenzi ekhokhelwayo. Kungenzeka futhi ukusebenzisa izixhumanisi kwezinye izinsizakalo zeminikelo.
Thola kusukela kwababhalisile
Ungashiya iziqephu ezibandakanya ikakhulukazi ukubhaliswa okukhokhelwayo. Khetha intengo ngokwakho.
Imali engenayo yezintatheli nababhali bamakhophi
Sikhokha ngokubuka ngakunye
Thola i- $ 0.04 ngokubukwa ngakunye kwe-100 kokuthunyelwe kwakho
Uhlelo lokuhambisana kwe-SEO
Abasebenzisi abaya ngqo kokuthunyelwe kwakho kusuka ekusesheni ngokuzenzakalela baba ukuthunyelwa kwakho - uthola ama-30% kusuka kuzinkokhelo zabo noma u-10% kusuka ekukhokhelweni kwabo.
Ungashiya okuthunyelwe okubandakanya ikakhulukazi ukubhaliswa okukhokhelwayo.
Uhlelo lobulungu bama-blogger kanye ne-webmasters
Yabelana ngesixhumanisi sakho sokudlulisela noma shumeka uhlelo lokusebenza kuwebhusayithi yakho - thola u-30% kuzinkokhelo zabasebenzisi noma u-10% kusuka ekukhokhelweni kwabo.
Ukukhetha okukhulu kwamakhasi okufika
Ungakhetha hhayi kuphela ikhasi lakho lokufika lephromoshini, kodwa futhi nanoma yikuphi okunye okuthunyelwe. I-ID yakho yokudlulisela izongezwa ngokuzenzakalela ngesikhathi sokwabelana ngekhasi.
Ungashumeka uhlelo lokusebenza kusayithi lakho
Uhlelo lokusebenza luzosebenza ngendlela emhlophe yelebula - luzofanelana nokwakheka kwesiza sakho kahle futhi luzothuthukisa izici zomsebenzisi. Bonke abasebenzisi abavela kusayithi lakho ngokuzenzekelayo baba ukuthunyelwa kwakho.
Qedela izibalo zokukhokha nokuhamba
Sebenzisa izibalo zangaphakathi nomlando wesenzo ukuhlola ithrafikhi nokuziphatha komsebenzisi. Ungangeza futhi i-ID yokulandelela ye-Google Analytics bese uthola imininingwane enemininingwane ephelele.
Buka imibukiso engokoqobo edumile, xoxa nosaziwayo futhi udale iphrojekthi yakho
Inqubomgomo yobumfihlo Imigomo Yokusebenzisa Affiliate agreement Creator agreement Ukusekela
Ingxoxo endala Imibukiso yangempela Ukusakazwa kwevidiyo Ingxoxo yevidiyo yamasayithi I-videochat eku-inthanethi Ingxoxo ye-Cam I-roulette yengxoxo